Ama-dandelion tattoos nencazelo yawo | Ukudweba imifanekiso emzimbeni
USusana godoy | | AmaTattoos wezimbali nezitshalo
Ngaphandle kokungabaza, ingenye yama-tattoos athandwa kakhulu phakathi kwamantombazane nabesifazane. Kunjalo, sikhuluma ngakho ama-dandelion tattoos. Akukhona okokuqala sikhuluma Ukudweba imifanekiso emzimbeni yalolu hlobo lwamathambo kusukela ngonyaka odlule, umlingani wami uMaria Jose usevele wasitshela ngamathambo wale mbali enhle futhi entekenteke. Yize futhi ngaleso sikhathi, sakhuluma kakhulu ngombono kunencazelo nophawu olunalo le tattoo.
Futhi yilokho esizokhuluma ngakho kule ndatshana, sizochaza uphawu nencazelo yokuthi ama-dandelion tattoos kanye nezizathu zokuthi umuntu angabamba le tattoo esikhumbeni sakhe. Ngakolunye uhlangothi, sizophinda sinikeze imibono yokuthola i-tattoo yangempela futhi ehlukile.
1 Asho ukuthini ama-dandelion tattoos?
2 Incazelo engokomoya
3 Imiklamo ye-Dandelion Tattoo
4 I-Dandelion tattoo enezinhlamvu
5 Ungayitholaphi i-dandelion tattoo
6 Intengo yeDandelion Tattoo
7 Izithombe ze-Dandelion Tattoos
Asho ukuthini ama-dandelion tattoos?
Manje uma uzimisele (noma uzimisele) uku umdwebo we-dandelionngicabanga ukuthi ungathanda ukwazi ukuthi le tattoo ibonisani nokuthi isho ukuthini. Imbali yedandelion ingesinye sezitshalo ezivame kakhulu ukuba khona, ikhula ngobuningi futhi cishe kunoma yisiphi isifunda somhlaba. Futhi ngukuthi, yize kungabonakala sengathi sikhuluma ngomdwebo omelela ubuningi, akukho okunye okuqhubekayo kusuka eqinisweni.
Ukuba ntekenteke kwayo nokuthi kuhlotshaniswa nezingane nentsha (sonke sishaye amanye ama-dandelion njengezingane) kwenza lawa ma-tattoo afanekisele ubumsulwa, ubumsulwa kanye nesifiso. Ngaphandle kwalokhu, ngeke sishiye eceleni ukuthi kungenzeka ukuthi abantu abaningi bazidweba le mbali ukumela umzuzu othile okhethekile ezimpilweni zabo noma inkumbulo esingafuni ukuhamba kwesikhathi ukuba mpunga futhi kungacaci.
Njengoba sishilo kahle, ubumsulwa ngenye yezinto izincazelo ezinhle eziboniswa ku-tattoo enjengale. Kepha sisengahamba kancane. Incazelo engokomoya yama-dandelion tattoos axhumanisa isimo sethu samanje nesikhathi esedlule. Yebo, kungazwakala kukuxakile kepha akunjalo. Kuyindlela yokungakhohlwa izinkumbulo ezinhle zobuntwana, zokuxhumana ngaso sonke isikhathi nokukhumbula izikhathi ezijabulisayo, noma okungenani, ngaphandle kwezinkinga ezinkulu. Umlingo nezifiso nakho kuhlobene nophawu lwayo. Yize lesi sitshalo uqobo saso sithathwa njengomlingo ngesinye isikhathi, ebusweni bencazelo yaso sasingeke sishiywe ngemuva.
EbuKristwini kwathiwa lokho lesi sitshalo sasihlotshaniswa nothando lukaJesu. Kuyafana nenhlanhla ehlala ihambisana nawe. Ngokwalokho esingakusho ukuthi sekuwuphawu oluhle futhi ngasikhathi sinye kuhlobene nokusinda, ukwelashwa namandla.
Imiklamo ye-Dandelion Tattoo
Kungcono ukuthi ubheke okuphelele dandelion tattoo gallery onakho ngezansi. Vele, uma kukhulunywa ngokuklanywa, siyabona ukuthi kukhona okuhlula konke okunye, okungenani ekuthandeni nasezikhathini eziningi ezibhalwe ngomdwebo. Futhi iyi-dandelion eshayiwe nezimbali zayo seziphenduke izinyoni ezincane.
Yize futhi ngicabanga ukuthi le tattoo "ibonwa kakhulu", ngokwami ​​ngingakhetha okuthile okuhlukile, manje, esizokuphawula ngakho manje kungumbono womuntu siqu kunanoma yini enye. Ngokwami, futhi uma bekufanele nginikeze umbono wami kothile ofuna ukwenza i-dandelion tattoo, bengizobatshela ukuthi bakhethe isitayela esihlukile, idizayini enjenge-watercolor ethinta okungaqondakali ingaba yinhle kakhulu. Ngakho-ke sisuka kude nedandelion ejwayelekile ngomhlambi wezinyoni.
I-Dandelion tattoo enezinhlamvu
Njengezinye izinhlobo zamathambo, singajabulela ukwahlukahluka okuningi kulokhu. Enye yazo ukubona ukuthi i- I-Dandelion tattoo ene-lettering ithatha indawo yokuqala. Mhlawumbe ngoba ngaphezu kokuba nakho konke ukufanekisa esikubalulile, sengeza incazelo entsha kukho. Lokhu sikukweleta izinhlamvu ezizokwakha amagama noma imishwana ethile.
Into ejwayelekile kakhulu ukubona amagama esikhuthazo noma lawo mabinzana amahle ahlala esikhumbuza ukuthi kufanele siqhubeke silwa nsuku zonke. Vele, kungcono ukukhetha amabinzana amafushane ukuze angabufihli ubuhle be-dandelion. Umqondo wokuqala ukuxuba ingxenye yembewu ne- izinhlamvu ngazinye lokho kuzokwakha igama. Kulokhu, kungcono kakhulu uma kuyigama elifanele.
Ungayitholaphi i-dandelion tattoo
Njengezincazelo zayo ezahlukahlukene, idandelion nayo ingaba umlingiswa ophambili wezindawo ezahlukahlukene zomzimba wakho. Kumele wazi ukuthi ingashintshwa ifane nalabo obathanda kakhulu.
Esihlakaleni: Yize kungahle kungabonakali njengokufana nayo, kungaba yi-tattoo enhle esihlakaleni. Vele, kuleli cala, kungakuhle ukuthi udale lesi sitshalo uqobo, futhi sibheke phezulu, futhi kube nembewu embalwa ezungezile.
Ehlombe: Enye yezinketho ezithandwa kakhulu yile, ngaphandle kokungabaza. Ihlombe liyingxenye yomzimba lapho i-dandelion tattoo ingaba kuye kuyo yonke inkazimulo yayo. Ngaphezu kwanoma yini ngoba izoba nomumo ovundlile, lapho singakhulisa khona imbewu bese uzihlanganisa nezinhlamvu noma imishwana esiyishilo.
Ntamo: Indawo yentamo yinhle futhi inesifiso esilinganayo. Kungakho-ke uma une-tattoo yalolu hlobo engqondweni, izobe ingaphezulu ngokuphelele. Usayizi wayo uzokwehliswa, kepha hhayi ubuhle bayo. Izinhlangothi zentamo nangemva kwezindlebe zikhethwe kakhulu ukuthi zihlotshiswe ngedandelion.
Pie: Uma ungabesabi ubuhlungu obungavela kumathambo ezinyawo, bese uqhubeka. Ngaphandle kokungabaza, kungenye ye- izindawo eziyizintandokazi ukukhombisa umklamo thanda lokhu. Indawo eseceleni nayo izobe iyiyona evelele kakhulu kulokhu.
I-Ankle: Ama-tattoo amaqakala ngokuvamile anokubona. Kepha kulokhu, sizokhetha umklamo oqhubekayo ukuhlobisa indawo yeqakala nokuyigcina inyuka ngomlenze kancane. Umdwebo obheke phezulu ohehayo futhi omuhle ngaso sonke isikhathi.
Izimbambo: Okwabesilisa nabesifazane, ama-tattoo ezimbanjeni Ngaso sonke isikhathi basinika okwangempela okukhulu, futhi baphelele ekwakhiweni okukhudlwana. Vele, ubuhlungu obubonakala kuleli cala buza engqondweni. Kodwa noma kunjalo, umphumela uzoba ukubonga okungokwemvelo kakhulu ngokugoba okungokwemvelo komzimba.Idandelion ijoyina lobo buwula bokugcina nobuhle.
Intengo yeDandelion Tattoo
Izintengo zeTattoo zingahluka impela kusuka endaweni eyodwa kuya kwenye, kanye nohlobo lwe-tattoo esikhuluma ngalo. Kulokhu, kukhona nokwehluka ngosayizi, kuya ngendawo yomzimba esiyikhethile. Singakutshela ukuthi intengo yayo ingahamba kusuka kuma-euro angama-80 kuye ngaphezu kwama-euro angama-110.
Izithombe ze-Dandelion Tattoos
Lapho kubuhlungu khona ukuthola i-tattoo: khomba lezi zindawo zomzimba
Indlela ephelele ye-athikili: Ukudweba imifanekiso emzimbeni » Izinhlobo zamathambo » AmaTattoos wezimbali nezitshalo » I-Dandelion tattoo
Xenia valerko kusho
Konke okuthakazelisa kakhulu! Kepha usebenzisa ibinzana elithi "manje kahle" izikhathi eziningi
Phendula u-Xenia Valerko
U-Antonio Fdez kusho
Uqinisile uXenia, sengivele ngikuvuselele okuthunyelwe. Kungumugqa wethegi enganginawo ngesikhathi sokubhala futhi kwesinye isikhathi udlala ngami kanjena 😛
Phendula u-Antonio Fdez
USusana godoy kusho
Sawubona, Luz !.
Kulokhu, isiqondiso se-tattoo asishintshi incazelo yaso, njengomthetho. Njengoba incazelo isuselwe kakhulu ekufanekisweni nasekuhlanganisweni kwezinto zayo hhayi kangako ukuthi zihlelwe kanjani ekwakhiweni kokugcina. Indawo yomzimba lapho siwuthatha khona inezinhlamvu ezingaphansi noma ezingaphansi komoya kanye nezomzwelo, kepha njengoba ngithi inkomba uqobo lwayo, ayithinti. 🙂
Phendula uSusana Godoy
Kuyini ukubhoboza okuhle kakhulu
Okushiwo ama-tattoglass e-hourglass